Madaxweynaha Kenya oo Codsaday in Wax laga beddelo hawlgalka ciidanka AMISOM ee Somalia | Gaaloos.com
Home » galmada » Madaxweynaha Kenya oo Codsaday in Wax laga beddelo hawlgalka ciidanka AMISOM ee Somalia
Madaxweynaha Kenya ayaa u soo jeediyay Golaha Amaanka iyo Nabad-galyada Midowga talooyin ay ka mid ahaayeen; In dib u eegis lagu sameeyo Hawl-galka AMISOM, si ay ugu dagaalamaan si u dhiganta habka ay u dagaallanto Al-shabaab.
In la hubiyo sidii ciidammo dhameystiran loo geyn lahaa meelaha khataruhu ka jiraan, sida qaybta Saddexaad ee Hawl-galka AMISOM, gaar ahaan gobolka Gedo. In Midowga Afrika ay Weydiistaan Qaramada Midoobay iyo Dalalka Caalamiga ah ee taageera howlgalka AMISOM, in ciidamada hadda ku sugan lagu biiriyo Ciidammo kale si Hawl-galkoodu u Xoogeysto.
Qaramada Midoobay waa inay ku taageerto howlgalka wax Walba oo lagama Maarmaan ah; sida qalab ciidan oo ku filan, si Hawlgalka uu u noqdo mid Guuleysta iyo In la helo Taageerooyinka loo baahan yahay oo ay ka mid yihiin; guryo, waddooyinka iyo in wax-soo-saarka meelaha Al-shabaab laga xoreeyay la xoojiyo, si ay u sahlanaato inay Qoxootiga Soomaaliyeed kusoo laabtaan.
Ugu dambeyn, Madaxweynaha Kenya ayaa wuxuu khudbadiisa kaga hadlay Xaaladaha ka taagan Dalalka Suudaanta Koonfureed iyo Burundi, isagoo ugu baaqay Midowga Afrika in si dhaqso ah wax looga qabto
Title: Madaxweynaha Kenya oo Codsaday in Wax laga beddelo hawlgalka ciidanka AMISOM ee Somalia